သ​င်္ဘောသား မလုပ်​ဖို့ တားကြသည့် အကြောင်းအရင်း – WunYan
သ​င်္ဘောသား မလုပ်​ဖို့ တားကြသည့် အကြောင်းအရင်း
Posted on November 11, 2018 by whuk-46651
ဒီက​နေ့​ခေတ်​မှာ သ​င်္ဘောသားအလုပ်​ဟာ လူငယ်​​တွေကြားမှာ​ခေတ်​စားလာပါတယ်​. ဆယ်​တန်း​အောင်​ပြီးတာနဲ့ သ​င်္ဘောသားလုပ်​ဖို့ တာဆူ​နေကြတဲ့ လူငယ်​​တွေက ခပ်​များများပါပဲ. လူငယ်​​တွေဘက်​က တက်​ကြွ​နေသလို တစ်​ဖက်​မှာလည်း စီနီယာ သ​င်္ဘောသားကြီး​တွေက သ​င်္ဘောသား​ လောကထဲကို မလာကြဖို့ လူငယ်​​တွေကို တတ်​နိုင်​သ​လောက်​ တားကြပါတယ်​
အ​ကြောင်းပြချက်​​တွေက​တော့ အများကြီးပါပဲ ကျွန်တော်​ လက်​လှမ်းမီသ​လောက်​​ ယေဘုယျအ​နေနဲ့ ​ပြောရရင်​…
– ဝင်​​ရောက်​ရန်​မလွယ်​ကူသလို ရုန်းထွက်​ရန်​လည်း ခက်​ခဲခြင်း
– အကျဉ်းကျသလို ခံစားရခြင်း နဲ့
– အခြားပုဂ္ဂိုလ်​​ရေးဆိုင်​ရာ ခံစားချက်​အချို့​ကြောင့်​လို့ သုံးသပ်​မိပါတယ်​.
အလုပ်​အကိုင်​ ရှားပါးကျပ်​တည်းလာခြင်းနဲ့ ပက်​သက်​ပြီး​ပြောရရင်​​တော့ အ​ကြောင်းအရာမျိုးစုံပါပဲ. ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ​ရေ​ကြောင်းသယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးလုပ်​ငန်း​တွေ စီးပွားကျဆင်းလာချိန်​, သ​င်္ဘော​တွေမှာ သ​င်္ဘောသားဦး​ရေဟာ ယခင်​ကထက်​ပိုမို​လျော့နည်းလာချိန်​, ယခင်​က သ​င်္ဘောသား​လောကကို စိတ်​ဝင်းစားမှုနည်းခဲ့တဲ့ နိုင်​ငံ​တွေကပါ သ​င်္ဘောသား​လောကဆီသို့ ဝင်​​ရောက်​လာချိန်​မှာ မြန်​မာပြည်​မှာလည်း သ​င်္ဘောသားလူသစ်​​တွေကို အဆမတန်​​ ပေါက်​ဖွား​ပေးလိုက်​ချိန်​နဲ့ အံကိုက်​ပါပဲ.
ဒါဟာ တမင်​တကာလုပ်​ယူတာ မဟုတ်​​ပေမဲ့လို့ အလွန်​ကို တိုက်​ဆိုင်​သွားတယ်​လို့ပဲ ယူဆမိပါတယ်​. ဒီအခါမှာ သ​င်္ဘောသား လူသစ်​​တွေအ​နေနဲ့ ယခင်​က အလုပ်​တစ်​​နေရာအတွက်​ နှစ်​ဦး သုံးဦး​လောက်​သာ ယှဉ်​ပြိုင်​​နေရာက​နေ ယခုလက်​ရှိ အ​ခြေအ​နေမှာ ဆယ်​​ယောက်​​လောက်​ အပြိုင်​အဆိုင်​ လု​နေရပါတယ်​. လူ​ဟောင်း​တွေလည်း ထိုနည်းလည်း​ကောင်းပါပဲ.
ကိုယ့်​နိုင်​ငံထဲက သ​င်္ဘောသားအပြင်​ နိုင်​ငံခြားသား​တွေနဲ့ပါ ​နေရာတစ်​​နေရာအတွက်​ ယှဉ်​ပြိုင်​လာရပါတယ်​. ဒီလို တွန်းတိုက်​မှု​တွေ​ကြောင့်​ အလုပ်​အကိုင်​​တွေ ကျပ်​တည်းလာရတာပါပဲ.
အခြားနိုင်​ငံက သ​င်္ဘောသား​တွေအတွက်​ ဒါဟာ ပြဿနာတစ်​ရပ်​ မဟုတ်​​ပေမဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံသား သ​င်္ဘောသားတစ်​​ယောက်​အတွက်​က​တော့ ကြီးစွာ​သော ပြဿနာပါပဲ. ဒီလို အပြိုင်​အဆိုင်​ တွန်းတိုက်​မှု​တွေဟာ ဒီနိုင်​ငံက သ​င်္ဘောသား​တွေအတွက်​ အရင်းအနှီး ကြီးမားခြင်းဆီကို ဦးတည်​လာ​ပါ​တော့တယ်​.
၂၀၁၀ ခုနှစ်​ ​ရှေ့ပိုင်းမှာ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ သ​င်္ဘောသားဦး​ရေဟာ ပုံမှန်​သာ ရှိခဲ့ပါတယ်​. ကမ်းရိုးတန်းသ​င်္ဘောကို တစ်​နှစ်​စီးပြီးမှ , စက်​ခန်းပိုင်းအတွက်​ဆို ​ဒေါက်​တစ်​နှစ်​ဆင်းပြီးမှသ​င်္ဘောသားနဲ့ ပက်​သက်​တဲ့ သင်​တန်း​တွေတက်​ သက်​ဆိုင်​ရာလက်​မှတ်​​တွေကို ကိုင်​​ဆောင်​လို့ ရတဲ့​ခေတ်​မှာ ​ပေးနိုင်​တဲ့ အလုပ်​အကိုင်​ အ​ရေအတွက်​နဲ့ တိုးပွားလာတဲ့ သ​င်္ဘောသားဦး​ရေဟာ ဟန်​ချက်​ညီညီ အချိုးညီညီ စီးဆင်းနေခဲ့ပါတယ်​.
​နောက်​ပိုင်း အ​ခြေခံအင်္ဂလိပ်​စာ အရည်​အ​သွေးစစ်​ စာ​မေးပွဲ (BEST) ​အောင်​မြင်​ပြီး သင်​တန်း​တွေတက်​ လက်​မှတ်​​တွေ ကိုင်​လို့ရပြီ ဆိုတဲ့​ခေတ်​နဲ့ ယ​နေ့​ခေတ်​လို ပိုက်​ဆံရှိရင်​ ​ငွေထုပ်​ပိုက်​ပြီး သ​င်္ဘောသား လုပ်​လို့ရပြီ ဆိုတဲ့​ခေတ်​​ရောက်​လာချိန်​မှာ​တော့ လူငယ်​​တွေရဲ့ ပါးစပ်​ဖျားမှာ, ငါ့သား သ​င်္ဘောသားဖြစ်​ဖို့ သိန်းတစ်​ရာနဲ့ ​လောက်​မလားလို့ ​မေးချင်​ကြတဲ့ ​ငွေရှိပြီး ​ခေါင်းမရှိတဲ့ လူ​တွေရဲ့ ပါးစပ်​ဖျားမှာ သ​င်္ဘောသားအလုပ်​ဟာ ​ရွှေထွက်​ လာပါ​တော့တယ်​.
ဒီလိုဖြစ်​လာတာဟာ​ နောက်​တက်​လာမယ့်​ သ​င်္ဘောသား​တွေကို ကြီးမားလှစွာ​သော တွင်း​နက်​ကြီးဆီကို ပို့​ဆောင်​သလို ဖြစ်​လာပါတယ်​. အဲဒါက​တော့ အရင်းအနှီး ကြီးမားခြင်းပါပဲ. မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ သ​င်္ဘောသားအလုပ်​အကိုင်​ဟာ လူတိုင်းကြိုက်​တဲ့ ​ရောင်းကုန်​ပစ္စည်းလို ဖြစ်​​နေပါတယ်​. ပိုင်​ဆိုင်​သူ​တွေက ​အေ့ဂျင့်​​တွေပါ.
ယခင်​က ဝယ်​သူနဲ့ ​ရောင်းကုန်​အချိုးဟာ မျှမျှတတ ဖြစ်​​နေတဲ့အခါ ​ရောင်းသူ​တွေကလည်း ပုံမှန်​​ဈေးနဲ့သာ ​ရောင်းချကြပါတယ်​. အပြိုင်​​ဈေး​ခေါ်တာမျိုးကို လုပ်​​လေ့လုပ်​ထ မရှိကြပါဘူး.
ယ​နေ့​ခေတ်​လို ဝယ်​လိုအား အဆမတန်​ များပြားလာတဲ့ အခါမှာ​တော့ သ​င်္ဘောသားအလုပ်​အကိုင်​ဆိုတဲ့ ရှားပါးကုန်​ပစ္စည်းကို ပိုင်​ဆိုင်​သူ​အေ့ဂျင့်​​တွေဟာ ကြိုက်​​ဈေး​ခေါ်ခွင့်​ ရှိလာပါတယ်​. ဒါဟာ သူတို့မရည်​ရွယ်​ဘဲ ရလာတဲ့ အခွင့်​အ​ရေးပါ. ဘယ်​သူမဆို ဝင်​​ငွေစီး​ကြောင်းတစ်​ခု ဖြစ်​လာရင်​ ဒီလမ်း​ကြောင်းထဲက ရသ​လောက်​​တော့ ခပ်​ချင်​ကြတာပါပဲ.
ခက်​တာက ​ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်​သူ​တွေအကြား ထိန်းညှိ​ပေးမှု မရှိတာပါပဲ. ရှိတဲ့ ဥပ​ဒေကလည်း ခိုင်​မာမှု အားနည်းတဲ့အခါ လက်​တစ်​လုံးခြား လှည့်​စားခြင်းကို ခံရတာပါပဲ.
၂၀၁၀ ခုနှစ်​ ​ရှေ့နားက သ​င်္ဘောသားလူသစ်​တစ်​​ယောက်​အတွက်​ ​အေ့ဂျင့်​ကို​ပေးရတဲ့ ရိုက်​​ကြေးဟာ နှစ်​ဆယ့်​ငါးသိန်းဝန်းကျင်​သာ ရှိခဲ့ပါတယ်​. ဒါဟာ လိုင်​စင်​ရှိတဲ့ ​အေ့ဂျင့်​​တွေကို ​ပေးရတဲ့ အရင်းအနှီးပါ.
အလိမ်​ခံရမှာလည်း မစိုးရိမ်​ရပါဘူး. ဒီက​နေ့​တော့ လိုင်​စင်​ရ​အေ့ဂျင့်​​တွေကို ​ပေးရတဲ့ ရိုက်​​ကြေးက သိန်း​ခြောက်​ဆယ်​ဝန်းကျင်​ ဖြစ်​လာပါပြီ. ဒီအချိန်​မှာပဲ ယခင်​က ဆယ်​သိန်းဝန်းကျင်​သာ ​ပေးရပြီး ခိုင်​မာမှုမရှိတဲ့ ​လိုင်​စင်​မဲ့ ​အေ့ဂျင့်​​တွေဟာ ဒီက​နေ့​တော့ ရိုက်​​ကြေးသိန်းသုံးဆယ်​ကို ခပ်​မာမာပဲ ​တောင်း​နေကြပါပြီ.
တစ်​နှစ်​လုံး​နေလို့မှ အရင်းမ​ကျေဘဲ အဲဒီ​လိုအေ့ဂျင့်​​တွေ စီစဉ်​​ပေးတဲ့ သ​င်္ဘော​တွေ​ပေါ်မှာ ​ရောက်​ရှိ​နေကြတဲ့ သ​င်္ဘောသားအ​ရေအတွက်​ကလည်း မနည်းလှပါဘူး.
သ​င်္ဘောသားဆိုပြီး သ​င်္ဘော​ပေါ်မ​ရောက်​ဘဲ မ​လေးရှားက လဖ္ဘက်​ရည်​ဆိုင်​​တွေ , ကားဝပ်​​ရှော့​တွေ စတဲ့ ​ရောက်​ရာမှာ ​အောင့်​အီးသည်းခံရင်း သ​င်္ဘောသားဘဝရဲ့ ပင်​လယ်​ပြင်​လုပ်​သက်​ကို အဆင်​​ပြေသလို ယူ​နေကြရတဲ့ သ​င်္ဘောသား ဆိုသူ​တွေလည်း မနည်းပါဘူး. သူတို့အတွက်​ အရင်းအနှီးဆိုတာ ​ငွေအပြင်​ အသက်​နဲ့ ဘဝပါ ပါလာပါပြီ.
ဒီလို​တွေ ပရမ်းပတာနိုင်​လှတဲ့ သ​င်္ဘောသား​လောကထဲကို မလာကြဖို့ တားဆီး​နေကြတာဟာ စီနီယာသ​င်္ဘောသားကြီး​တွေဘက်​က​ အမှားမဟုတ်​ပါဘူး. တားသင့်​လို့ တား​နေကြတာပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်​. ခု​ခေတ်​မှာ ပိုဆိုးလာတာက ​အေ့ဂျင့်​​တွေကို ရိုက်​​ကြေး​ပေးရတဲ့အပြင်​ လိုင်းတစ်​လိုင်းမှာ အလုပ်​ရဖို့အတွက်​ ‘ ​နောက်​​ပေါက်​ ‘ ဆိုသူ​တွေကိုပါ ပိုက်​ဆံ​တွေ ထပ်​ပြီး​ပေး​နေကြရတာပါပဲ.
ယခင်​က ​နောက်​​ပေါက်​​ကြေးဆိုတာ ​လေးငါး​သောင်း​အပြင်​ သတ်​သတ်​မှတ်​မှတ်​ မရှိလှ​ပေမဲ့ ဒီက​နေ့​ခေတ်​​တော့ ​နောက်​​ပေါက်​​ကြေးကို ​လေးငါးသိန်းဆိုတာမျိုး လစာ​တောင်းသလို ​ပေါ်တင်​ယူ​ပြီး သ​င်္ဘောသား​တွေရဲ့ အားနည်းချက်​ကို အခွင့်​​ကောင်းယူ ​ခေါင်းပုံဖြတ်​​နေကြတဲ့အခါ သ​င်္ဘောသား​တွေရဲ့ အရင်းအနှီးဟာ ပိုပြီးကြီးလာပါ​တော့တယ်​.
အခု​တော့ လူသစ်​​တွေ ​ပေးရတဲ့အရှိန်​နဲ့ လူ​ဟောင်း​တွေကပါ ​နောက်​​ပေါက်​​ကြေး​တွေ ​ပေး​ပေး​နေရပါတယ်​. လိုင်းသစ်​တစ်​ခါ​ပြောင်းရင်​ ​နောက်​​ပေါက်​ကို ရှာရတဲ့အလုပ်​ကလည်း အ​မောပါပဲ. ဒါ​တွေကို ခုချိန်​ထိ ထိန်းညှိနိုင်​မှု မရှိ​သေးပါဘူး. လုပ်​ဖို့လည်း ခက်​လှပါတယ်​.
ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ ​နောက်​တက်​လာတဲ့ သ​င်္ဘောသား​တွေရဲ့ စိတ်​ထဲမှာကိုက ​နောက်​​ပေါက်​နဲ့မှ အလုပ်​ရဖို့ လွယ်​တယ်​ဆိုတဲ့ အ​တွေး​တွေ ဝင်​​နေလို့ပါပဲ. အဲဒီလို ဖြစ်​လာ​အောင်​လည်း ဖန်​တီးသူ​တွေက ဖန်​တီးနိုင်​ခဲ့ကြပါတယ်​.
အမှန်​က​တော့ သ​င်္ဘောသားအချင်းချင်းသာ လက်​တွဲ​ခေါ်မယ်​ဆိုရင်​ ​နောက်​​ပေါက်​ဆိုတာ ​နောက်​​ဖေး​ချောင်​မှာ ​ရောက်​​နေရမှာပါ. နောက်​​ပေါက်​ဘဝက​နေ ​နောက်​​ရောက်​ဘဝကို ပို့​ပေးနိုင်​ကြရမှာပါ. ဒါ​ပေမဲ့လည်း အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ သ​င်္ဘောသားအချင်းချင်း ​ခေါင်းခံနိုင်​မှု​တွေဟာလည်း ရှားပါး​နေဆဲပါပဲ.
သ​င်္ဘောသား​လောကထဲကို မလာကြပါနဲ့လို့ တား​နေကြရတဲ့ ​အေ​ကြာင်းရင်း​​တွေထဲက နောက်​တစ်​ချက်​က​တော့ ဒီ​လောကထဲကို ဝင်​​ရောက်​နိုင်​ဖို့ ခက်​ခဲပြီး ဝင်​​ရောက်​ခဲ့ပြီးရင်​လည်း ပြန်​လည်​ရုန်းထွက်​နိုင်​ဖို့ခက်​ခဲတာ​ကြောင့်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​. သ​င်္ဘောသား​တွေဟာ သ​င်္ဘောသားဖြစ်​လာဖို့ ခက်​ခက်​ခဲခဲ ရုန်းကန်​, အရင်းအနှီး​တွေ အများကြီး ​ပေးဆပ်​ရသလို ငြီး​ငွေ့လွန်းလို့ ပြန်​ရုန်းထွက်​ပြန်​ရင်​လည်းမလွယ်​ပြန်​ပါဘူး. များ​သောအားဖြင့်​ သ​င်္ဘောလိုက်​ကြတယ်​ဆိုတာ ဝင်​​ငွေ​လေး​ကောင်းတယ်​ ,ခပ်​သွက်​သွက်​​လေး ​ငွေရှာ ရင်းနှီး​လောက်​စရာ ပမာဏ​လေးရရင်​ သ​င်္ဘောသားဘဝကနား ကိုယ်​ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်​​လေးလုပ်​ပြီး ဘဝကို အ​ခြေချ. ဒီလိုစိတ်​ကူး​တွေနဲ့ လုပ်​ကြတာများပါတယ်​.
( ဝါသနာပါလို့ ဒါမှမဟုတ်​ ​ရေ​ကြောင်းဆိုင်​ရာ ဒီပလိုမာ, ဘွဲ့ ရထားလို့ လုပ်​ကြတဲ့သူ​တွေလည်း တစ်​ပုံတစ်​ပင်​​ပေါ့)
ဒါ​ပေမဲ့ သ​င်္ဘောသား​လောကထဲကို ဝင်​​ရောက်​တာ ကြာလာ​လေ​လေ ကုန်း​ပေါ်ကို​ ပြန်​​ရောက်​နိုင်​ဖို့ ခက်​​လေ​လေပါပဲ. ​ရေထဲမှာ တစ်​နှစ်​ဆိုတဲ့ အချိန်​ ကုန်​ဆုံးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်​လက်​ထဲမှာ ​ငွေ​ကြေးအချို့ ရှိလာခဲ့​ပေမဲ့ ပတ်​ဝန်းကျင်​နဲ့ အဆက်​ပြတ်​သွားတဲ့ ဦး​နှောက်​က​တော့ ​ခေတ်​​နောက်​ကျန်​​နေခဲ့ပါတယ်​.
အ​ပြောင်းအလဲမြန်​တဲ့​ခေတ်​ဆို​တော့ ပိုဆိုးပါတယ်​. အင်​တာနက်​လိုင်း​ သုံးစွဲရချိန်​မှာသာ သ​င်္ဘောသားဟာ ပတ်​ဝန်းကျင်​နဲ့ ထိ​တွေ့ရပါတယ်​. ဒါ​တောင်​ ဟန်​​ဆောင်​မှု​တွေ ပြည့်​​နေတဲ့ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ဝန်းကျင်​က သတင်း​တွေရဲ့ ဖျား​ယောင်းမှုကိုလည်း ခံရပါ​သေးတယ်​.
သ​င်္ဘော​ပေါ်ကို ​ငွေရှာရုံသက်​သက်​နဲ့ တက်​သွားလို့က​တော့ ​ငွေကလွဲပြီး ဘာမှကျန်​မှာ မဟုတ်​ပါဘူး. ဦး​နှောက်​ထဲ ဘာမှမတိုးတက်​လာတဲ့အခါ အိမ်​ပြန်​​ရောက်​ရင်​လည်း ခဏနားပြီးသ​င်္ဘော​ပေါ်ကို ပြန်​​ရောက်​လာတာပါပဲ. လူလတ်​ပိုင်း, လူကြီးပိုင်း​တွေအတွက်​ သိပ်​ပြဿနာ မရှိလှ​ပေမဲ့ လူငယ်​ပိုင်း​တွေအတွက်​​တော့ ဒါဟာ သတိထားစရာ အချက်​တစ်​ခုပါပဲ.
ပညာသင်​ရဦးမယ့်​ အရွယ်​မှာ သ​င်္ဘော​ပေါ်မှာ အလုပ်​လုပ်​ရင်း ​ငွေချည်းသက်​သက်​ကိုပဲ ရှာ​ဖွေ​နေကြမယ်​ဆိုရင်​ သ​င်္ဘောသားဘဝထဲမှာ အချိန်​ကြာမြင့်​စွာ ပိတ်​မိပြီး ရုန်းထွက်​နိုင်​ဖို့ ​တော်​​တော့်​ကို ခက်​ခဲသွားပါလိမ့်​မယ်​.
( လူငယ်​​တွေအ​ပေါ် ကျ​နော့်​အ​တွေးက မှန်​ချင်​မှလည်း မှန်​နိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​ )
တစ်​ခါတစ်​​လေ နားချင်​စိတ်​နဲ့ ကုန်း​ပေါ်မှာ အလုပ်​စမ်းလုပ်ကြည့်​လို့ အရှုံး​တွေနဲ့ ရင်​ဆိုင်​ရတဲ့အခါမှာ ပိုဆိုးသွားပါတယ်​.
( အင်​နာဗွန်​စီ မ​သောက်​မိလို့လည်း ဖြစ်​​ကောင်းဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​ )
” ဟာ မဖြစ်​ပါဘူး​လေ ” ဆိုတဲ့ အ​တွေးဝင်​သွားရင်​​တော့ ​နေ​ပေ​တော့ သ​င်္ဘောသားဘဝနဲ့။ ဒါ​ကြောင့်​ သ​င်္ဘောသားဘဝက​နေ ရုန်းထွက်​ဖို့ ကြိုးစားသူတိုင်း ပြတ်​သားတဲ့စိတ်​ရှိဖို့ လိုပါတယ်​. တစ်​နည်းအားဖြင့်​ သတ္တိရှိဖို့ လိုပါတယ်​. ဝင်​​ငွေချင်း နှိုင်းယှဉ်​​နေသ​ရွေ့က​တော့ ဒီတစ်​သက်​ သ​င်္ဘောသားဘဝက ရုန်းထွက်​ဖို့ မလွယ်​ပါဘူး. သ​င်္ဘောသား ​တော်​​တော်​များများမှာ ခံစားရတတ်​တာက​တော့ အကျဉ်းကျမှုပါပဲ.
အလုပ်​များလှတဲ့ သ​င်္ဘောသား​တွေ, ဖိအားများပြီး ​ခေါင်းခံရမှုများတဲ့ အရာရှိ ,အင်​ဂျင်​​နီယာ​တွေအတွက်​ သိပ်​မသိသာလှ​ပေမဲ့သ​င်္ဘော​ပေါ်မှာ အသားကျပြီး ပုံမှန်​​လောက်​သာ အလုပ်​လုပ်​ရတဲ့ သ​င်္ဘောသား​တွေနဲ့ ​ကျောက်​ချထားတဲ့ သ​င်္ဘော​တွေ​ပေါ်​ရောက်​​နေတဲ့ သ​င်္ဘောသား​တွေအတွက်​က​တော့ အထီးကျန်​မှုနဲ့ အကျဉ်းကျမှုဒဏ်​ကို ခံကြရတာများပါတယ်​.
လုပ်​စရာရှိတာ​တွေ လုပ်​ပြီးလို့ အခန်းကျဉ်း​လေးထဲ ပြန်​​ရောက်​လာတဲ့အခါ စိတ်​ကတွယ်​ရာမဲ့တတ်​ပါတယ်​. စ်ိတ်​​တွေကအပြင်​ကို ပျံထွက်​သွား​ပေမဲ့ လူက​တော့ ဘယ်​ကိုမှ သွားလို့မရတဲ့ အ​ခြေအ​နေမှာ စိန်​​ခေါ်စရာ တစ်​ခုခုကို လုပ်​​ဆောင်​မ​နေတဲ့ သ​င်္ဘောသားဟာ’ ဂါ ‘ လာပါတယ်​. ဒါ​ကြောင့်​ သ​င်္ဘော​ပေါ်သွားပြီး​ငွေရှာကြရတဲ့အပြင်​ ကိုယ့်​စိတ်​က ငြိတွယ်​နိုင်​​လောက်​မယ့်​ အရာ​တွေကိုလည်း ဖန်​တီးနိုင်​ဖို့ ကြိုးစားကြရပါတယ်​.
စာဖတ်​ခြင်း, ကဗျာ​ရေးခြင်း, ဂစ်​တာတီးခြင်း, သီချင်း​ရေးခြင်း ဆိုခြင်း, ဂိမ်း​ဆော့ခြင်း,ဖဲရိုက်​ခြင်းဗီဒီယိုကြည့်​ခြင်း စတဲ့ ကိုယ်​နဲ့အဆင်​​ပြေရာမှာ စိတ်​ကိုနှစ်​ပြီး ​နေနိုင်​​အောင်​ ကြိုးစားကြရပါတယ်​. တချို့ကလည်း သ​င်္ဘောနဲ့ သက်​ဆိုင်​တဲ့ ပညာရပ်​​တွေကို ထပ်​ဆင့်​​လေ့လာရင်း ကိုယ့်​ရဲ့ဘဝကို ​နောက်​တစ်​ဆင့်​မြှင့်​ဖို့ ကြိုးစားကြရပါတယ်​.
ဘယ်​လိုပဲ ကြိုးစား​နေကြ​ပေမဲ့လည်း တစ်​ခါတစ်​​လေ ဝင်​​ရောက်​လာတတ်​တဲ့ ‘ အကျဉ်းကျမှု ‘ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်​ကို​တော့ ဘယ်​လိုမှ လွတ်​​မြောက်​​အောင်​ မစွမ်း​ဆောင်​နိုင်​ကြပါဘူး. အဲဒီအခါမျိုးမှာ သ​င်္ဘောသား​တွေဟာ ရှိသမျှအရာအားလုံးကို လွှတ်​ချထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်​စိတ်​ ပျံသန်းရာဆီ အ​ပြေးသွားလိုက်​ချင်​​တော့တာပါပဲ.
သ​င်္ဘောသား​တွေရဲ့ ခံစားချက်​​တွေက​တော့ ​ရေးမကုန်​နိုင်​​အောင်​ပါပဲ. သ​င်္ဘောသား​တွေဟာလည်း ပုထုစဉ်​လူသား​တွေ ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ သူတို့လည်း ကာမဂုဏ်​အာရုံ​တွေမှာ ​ပျော်​​မွေ့ကြတာပါပဲ. အမြဲတမ်းလိုလို မဟုတ်​လှ​ပေမဲ့ တစ်​ခါတစ်​​လေ​တော့လည်း ကိုယ်​စားချင်​တာ​လေး​တွေ ကိုယ်​သွားချင်​တာ​လေး​တွေ စသည်​အားဖြင့်​ ​တောင့်​တမှု​လေး​တွေ ရှိတတ်​ကြပါတယ်​. ဒါ​ပေမဲ့လည်း ဒါ​တွေဟာ စိတ်​ကူးယဉ်​မှုသာဖြစ်​ပြီး ပင်​လယ်​ထဲမှာ ဘယ်​လိုမှ ဖန်​တီးယူလို့မရတဲ့ အရာ​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​.
ဒါ​ကြောင့်​လည်း ပင်​လယ်​​ပျော်​​တွေရဲ့ ရင်​ဘတ်​ဟာ အခြားသူ​တွေနဲ့ မတူညီဘဲ ကွဲပြားစွာ ခံစားတတ်​ကြတာပါပဲ. ထပ်​ပြီး ​ရေး​နေရင်​လည်းညည်းချင်းတစ်​ပုဒ်​သာ ဖြစ်​လာမှာမို့ ခံစားချက်​အ​ကြောင်းကို​တော့ အနည်းငယ်​သာ တင်​ပြလိုက်​ရပါတယ်​.
စီနီယာသ​င်္ဘောသား​တွေအ​နေနဲ့ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ​နောက်​လူငယ်​​တွေကို သ​င်္ဘောသားမလုပ်​ကြဖို့ ဘယ်​လိုပင်​ တား​နေကြ​ပေမဲ့လည်း လူငယ်​​တွေက​တော့ လူငယ်​တို့ ထုံးစံအတိုင်း ​ရှေ့တိုးလာမှာပါပဲ.
ဒါဟာ လူကြီးနဲ့ လူငယ်​တို့ရဲ့ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ သဘာဝပါပဲ. တားလို့လည်း ရမှာမဟုတ်​ပါဘူး. လူငယ်​ဆိုတာ စွန့်​စားလိုတယ်​, စူးစမ်းလိုတယ်​ ပြီး​တော့ စိတ်​ဓာတ်​တက်​ကြွကြတယ်​. ​နောက်​….နဖူး​တွေ့ ဒူး​တွေ့ ကြုံ​တော့မှသာ ” အဘား အဘား ” နဲ့ ​အော်​ရင်​​အော်​ရပါ​စေ သူတို့က​တော့ တုံးတိုက်​တိုက်​ ကျားကိုက်​ကိုက်​ လုပ်​ကြမှာပါပဲ. သူတို့ရဲ့ ‘ အလုပ်​အ​ပေါ် စိတ်​ဝင်​စားမှု ‘ ကို တားစရာလည်း မလိုဘူးလို့ ကျ​နော်​ထင်​ပါတယ်​. ဒီ​တော့ ဘာလုပ်ြက​သင့်​သလဲ ?
” မလာပါနဲ့ မလုပ်​ပါနဲ့ ” လို့ တား​နေကြမယ့်​အစား ဘယ်​လမ်းကို​လျှောက်​ရင်​​တော့ ဘယ်​ခရီးကို​ပေါက်​တယ်​ , ဘယ်​လိုအန္တရာယ်​​တွေကို ဘယ်​လိုဖြတ်​​ကျော်​ရမယ်​ , ဘာ​တွေကို​ရှောင်​ပြီး ဘာ​တွေကို ​ဆောင်​သင့်​တယ်​ဆိုတာ​တွေကိုသာ လမ်းညွှန်​အကြံ​ပေးကြတာက အသင့်​​တော်​ဆုံးပါပဲ လို့ ယူဆမိပါတယ်​.
သူတို့ ​လျှောက်​မယ့်​လမ်း သူတို့​ရွေးပါ​စေ… သူတို့ဘဝအတွက်​ သူတို့ဆုံးဖြတ်​ပါ​စေ​လေ…. တတ်​နိုင်​သ​ရွေ့​တော့ လမ်းညွှန်​​နေဆဲ နိုင်​လင်း ( ပင်​လယ်​​ပျော်​ )
ဒီ​ဆောင်းပါးထဲမှာ ​ရေးခဲ့တဲ့အချက်​အလက်​​တွေဟာ မပြည့်​စုံ​သေးပါဘူး. စာသိပ်​ရှည်​​နေလို့ ပြီး​တော့ ဖန်​တစ်​ရာ​တေ ​ဝေဖန်​ချက်​​တွေကို ထပ်​မထည့်​ချင်​​တော့လို့ ချန်​လှပ်​ထားခဲ့ပါတယ်​.
မှတ်​ချက်​မှာ လိုတာ​တွေ ဖြည့်​​ပေးကြပါ​တော့…..
သင်ျဘောသား မလုပျဖို့ တားကွသညျ့ အကွောငျးအရငျး
ဒီကနခေ့တျေမှာ သင်ျဘောသားအလုပျဟာ လူငယျတှကွေားမှာခတျေစားလာပါတယျ. ဆယျတနျးအောငျပွီးတာနဲ့ သင်ျဘောသားလုပျဖို့ တာဆူနကွေတဲ့ လူငယျတှကေ ခပျမြားမြားပါပဲ. လူငယျတှဘေကျက တကျကွှနသေလို တဈဖကျမှာလညျး စီနီယာ သင်ျဘောသားကွီးတှကေ သင်ျဘောသား လောကထဲကို မလာကွဖို့ လူငယျတှကေို တတျနိုငျသလောကျ တားကွပါတယျ
အကွောငျးပွခကျြတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ ကြှနျတျော လကျလှမျးမီသလောကျ ယဘေုယအြနနေဲ့ ပွောရရငျ…
– ဝငျရောကျရနျမလှယျကူသလို ရုနျးထှကျရနျလညျး ခကျခဲခွငျး
– အကဉျြးကသြလို ခံစားရခွငျး နဲ့
– အခွားပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ ခံစားခကျြအခြို့ကွောငျ့လို့ သုံးသပျမိပါတယျ.
အလုပျအကိုငျ ရှားပါးကပျြတညျးလာခွငျးနဲ့ ပကျသကျပွီးပွောရရငျတော့ အကွောငျးအရာမြိုးစုံပါပဲ. ကမ်ဘာနဲ့ခြီပွီး ရကွေောငျးသယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျးတှေ စီးပှားကဆြငျးလာခြိနျ, သင်ျဘောတှမှော သင်ျဘောသားဦးရဟော ယခငျကထကျပိုမိုလြော့နညျးလာခြိနျ, ယခငျက သင်ျဘောသားလောကကို စိတျဝငျးစားမှုနညျးခဲ့တဲ့ နိုငျငံတှကေပါ သင်ျဘောသားလောကဆီသို့ ဝငျရောကျလာခြိနျမှာ မွနျမာပွညျမှာလညျး သင်ျဘောသားလူသဈတှကေို အဆမတနျ ပေါကျဖှားပေးလိုကျခြိနျနဲ့ အံကိုကျပါပဲ.
ဒါဟာ တမငျတကာလုပျယူတာ မဟုတျပမေဲ့လို့ အလှနျကို တိုကျဆိုငျသှားတယျလို့ပဲ ယူဆမိပါတယျ. ဒီအခါမှာ သင်ျဘောသား လူသဈတှအေနနေဲ့ ယခငျက အလုပျတဈနရောအတှကျ နှဈဦး သုံးဦးလောကျသာ ယှဉျပွိုငျနရောကနေ ယခုလကျရှိ အခွအေနမှော ဆယျယောကျလောကျ အပွိုငျအဆိုငျ လုနရေပါတယျ. လူဟောငျးတှလေညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပါပဲ.
ကိုယျ့နိုငျငံထဲက သင်ျဘောသားအပွငျ နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ပါ နရောတဈနရောအတှကျ ယှဉျပွိုငျလာရပါတယျ. ဒီလို တှနျးတိုကျမှုတှကွေောငျ့ အလုပျအကိုငျတှေ ကပျြတညျးလာရတာပါပဲ.
အခွားနိုငျငံက သင်ျဘောသားတှအေတှကျ ဒါဟာ ပွဿနာတဈရပျ မဟုတျပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား သင်ျဘောသားတဈယောကျအတှကျကတော့ ကွီးစှာသော ပွဿနာပါပဲ. ဒီလို အပွိုငျအဆိုငျ တှနျးတိုကျမှုတှဟော ဒီနိုငျငံက သင်ျဘောသားတှအေတှကျ အရငျးအနှီး ကွီးမားခွငျးဆီကို ဦးတညျလာပါတော့တယျ.
၂၀၁၀ ခုနှဈ ရှပေို့ငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သင်ျဘောသားဦးရဟော ပုံမှနျသာ ရှိခဲ့ပါတယျ. ကမျးရိုးတနျးသင်ျဘောကို တဈနှဈစီးပွီးမှ , စကျခနျးပိုငျးအတှကျဆို ဒေါကျတဈနှဈဆငျးပွီးမှသင်ျဘောသားနဲ့ ပကျသကျတဲ့ သငျတနျးတှတေကျ သကျဆိုငျရာလကျမှတျတှကေို ကိုငျဆောငျလို့ ရတဲ့ခတျေမှာ ပေးနိုငျတဲ့ အလုပျအကိုငျ အရအေတှကျနဲ့ တိုးပှားလာတဲ့ သင်ျဘောသားဦးရဟော ဟနျခကျြညီညီ အခြိုးညီညီ စီးဆငျးနခေဲ့ပါတယျ.
နောကျပိုငျး အခွခေံအင်ျဂလိပျစာ အရညျအသှေးစဈ စာမေးပှဲ (BEST) အောငျမွငျပွီး သငျတနျးတှတေကျ လကျမှတျတှေ ကိုငျလို့ရပွီ ဆိုတဲ့ခတျေနဲ့ ယနခေ့တျေလို ပိုကျဆံရှိရငျ ငှထေုပျပိုကျပွီး သင်ျဘောသား လုပျလို့ရပွီ ဆိုတဲ့ခတျေရောကျလာခြိနျမှာတော့ လူငယျတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ, ငါ့သား သင်ျဘောသားဖွဈဖို့ သိနျးတဈရာနဲ့ လောကျမလားလို့ မေးခငျြကွတဲ့ ငှရှေိပွီး ခေါငျးမရှိတဲ့ လူတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ သင်ျဘောသားအလုပျဟာ ရှထှေကျ လာပါတော့တယျ.
ဒီလိုဖွဈလာတာဟာ နောကျတကျလာမယျ့ သင်ျဘောသားတှကေို ကွီးမားလှစှာသော တှငျးနကျကွီးဆီကို ပို့ဆောငျသလို ဖွဈလာပါတယျ. အဲဒါကတော့ အရငျးအနှီး ကွီးမားခွငျးပါပဲ. မွနျမာနိုငျငံမှာ သင်ျဘောသားအလုပျအကိုငျဟာ လူတိုငျးကွိုကျတဲ့ ရောငျးကုနျပစ်စညျးလို ဖွဈနပေါတယျ. ပိုငျဆိုငျသူတှကေ အဂေ့ငျြ့တှပေါ.
ယခငျက ဝယျသူနဲ့ ရောငျးကုနျအခြိုးဟာ မြှမြှတတ ဖွဈနတေဲ့အခါ ရောငျးသူတှကေလညျး ပုံမှနျဈေးနဲ့သာ ရောငျးခကြွပါတယျ. အပွိုငျဈေးချေါတာမြိုးကို လုပျလလေု့ပျထ မရှိကွပါဘူး.
ယနခေ့တျေလို ဝယျလိုအား အဆမတနျ မြားပွားလာတဲ့ အခါမှာတော့ သင်ျဘောသားအလုပျအကိုငျဆိုတဲ့ ရှားပါးကုနျပစ်စညျးကို ပိုငျဆိုငျသူအဂေ့ငျြ့တှဟော ကွိုကျဈေးချေါခှငျ့ ရှိလာပါတယျ. ဒါဟာ သူတို့မရညျရှယျဘဲ ရလာတဲ့ အခှငျ့အရေးပါ. ဘယျသူမဆို ဝငျငှစေီးကွောငျးတဈခု ဖွဈလာရငျ ဒီလမျးကွောငျးထဲက ရသလောကျတော့ ခပျခငျြကွတာပါပဲ.
ခကျတာက ရောငျးသူနဲ့ ဝယျသူတှအေကွား ထိနျးညှိပေးမှု မရှိတာပါပဲ. ရှိတဲ့ ဥပဒကေလညျး ခိုငျမာမှု အားနညျးတဲ့အခါ လကျတဈလုံးခွား လှညျ့စားခွငျးကို ခံရတာပါပဲ.
၂၀၁၀ ခုနှဈ ရှနေ့ားက သင်ျဘောသားလူသဈတဈယောကျအတှကျ အဂေ့ငျြ့ကိုပေးရတဲ့ ရိုကျကွေးဟာ နှဈဆယျ့ငါးသိနျးဝနျးကငျြသာ ရှိခဲ့ပါတယျ. ဒါဟာ လိုငျစငျရှိတဲ့ အဂေ့ငျြ့တှကေို ပေးရတဲ့ အရငျးအနှီးပါ.
အလိမျခံရမှာလညျး မစိုးရိမျရပါဘူး. ဒီကနတေ့ော့ လိုငျစငျရအဂေ့ငျြ့တှကေို ပေးရတဲ့ ရိုကျကွေးက သိနျးခွောကျဆယျဝနျးကငျြ ဖွဈလာပါပွီ. ဒီအခြိနျမှာပဲ ယခငျက ဆယျသိနျးဝနျးကငျြသာ ပေးရပွီး ခိုငျမာမှုမရှိတဲ့ လိုငျစငျမဲ့ အဂေ့ငျြ့တှဟော ဒီကနတေ့ော့ ရိုကျကွေးသိနျးသုံးဆယျကို ခပျမာမာပဲ တောငျးနကွေပါပွီ.
တဈနှဈလုံးနလေို့မှ အရငျးမကဘြေဲ အဲဒီလိုအဂေ့ငျြ့တှေ စီစဉျပေးတဲ့ သင်ျဘောတှပေျေါမှာ ရောကျရှိနကွေတဲ့ သင်ျဘောသားအရအေတှကျကလညျး မနညျးလှပါဘူး.
သင်ျဘောသားဆိုပွီး သင်ျဘောပျေါမရောကျဘဲ မလေးရှားက လဖ်ဘကျရညျဆိုငျတှေ , ကားဝပျရှော့တှေ စတဲ့ ရောကျရာမှာ အောငျ့အီးသညျးခံရငျး သင်ျဘောသားဘဝရဲ့ ပငျလယျပွငျလုပျသကျကို အဆငျပွသေလို ယူနကွေရတဲ့ သင်ျဘောသား ဆိုသူတှလေညျး မနညျးပါဘူး. သူတို့အတှကျ အရငျးအနှီးဆိုတာ ငှအေပွငျ အသကျနဲ့ ဘဝပါ ပါလာပါပွီ.
ဒီလိုတှေ ပရမျးပတာနိုငျလှတဲ့ သင်ျဘောသားလောကထဲကို မလာကွဖို့ တားဆီးနကွေတာဟာ စီနီယာသင်ျဘောသားကွီးတှဘေကျက အမှားမဟုတျပါဘူး. တားသငျ့လို့ တားနကွေတာပဲလို့ ယူဆမိပါတယျ. ခုခတျေမှာ ပိုဆိုးလာတာက အဂေ့ငျြ့တှကေို ရိုကျကွေးပေးရတဲ့အပွငျ လိုငျးတဈလိုငျးမှာ အလုပျရဖို့အတှကျ ‘ နောကျပေါကျ ‘ ဆိုသူတှကေိုပါ ပိုကျဆံတှေ ထပျပွီးပေးနကွေရတာပါပဲ.
ယခငျက နောကျပေါကျကွေးဆိုတာ လေးငါးသောငျးအပွငျ သတျသတျမှတျမှတျ မရှိလှပမေဲ့ ဒီကနခေ့တျေတော့ နောကျပေါကျကွေးကို လေးငါးသိနျးဆိုတာမြိုး လစာတောငျးသလို ပျေါတငျယူပွီး သင်ျဘောသားတှရေဲ့ အားနညျးခကျြကို အခှငျ့ကောငျးယူ ခေါငျးပုံဖွတျနကွေတဲ့အခါ သင်ျဘောသားတှရေဲ့ အရငျးအနှီးဟာ ပိုပွီးကွီးလာပါတော့တယျ.
အခုတော့ လူသဈတှေ ပေးရတဲ့အရှိနျနဲ့ လူဟောငျးတှကေပါ နောကျပေါကျကွေးတှေ ပေးပေးနရေပါတယျ. လိုငျးသဈတဈခါပွောငျးရငျ နောကျပေါကျကို ရှာရတဲ့အလုပျကလညျး အမောပါပဲ. ဒါတှကေို ခုခြိနျထိ ထိနျးညှိနိုငျမှု မရှိသေးပါဘူး. လုပျဖို့လညျး ခကျလှပါတယျ.
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နောကျတကျလာတဲ့ သင်ျဘောသားတှရေဲ့ စိတျထဲမှာကိုက နောကျပေါကျနဲ့မှ အလုပျရဖို့ လှယျတယျဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ဝငျနလေို့ပါပဲ. အဲဒီလို ဖွဈလာအောငျလညျး ဖနျတီးသူတှကေ ဖနျတီးနိုငျခဲ့ကွပါတယျ.
အမှနျကတော့ သင်ျဘောသားအခငျြးခငျြးသာ လကျတှဲချေါမယျဆိုရငျ နောကျပေါကျဆိုတာ နောကျဖေးခြောငျမှာ ရောကျနရေမှာပါ. နောကျပေါကျဘဝကနေ နောကျရောကျဘဝကို ပို့ပေးနိုငျကွရမှာပါ. ဒါပမေဲ့လညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သင်ျဘောသားအခငျြးခငျြး ခေါငျးခံနိုငျမှုတှဟောလညျး ရှားပါးနဆေဲပါပဲ.
သင်ျဘောသားလောကထဲကို မလာကွပါနဲ့လို့ တားနကွေရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲက နောကျတဈခကျြကတော့ ဒီလောကထဲကို ဝငျရောကျနိုငျဖို့ ခကျခဲပွီး ဝငျရောကျခဲ့ပွီးရငျလညျး ပွနျလညျရုနျးထှကျနိုငျဖို့ခကျခဲတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ. သင်ျဘောသားတှဟော သင်ျဘောသားဖွဈလာဖို့ ခကျခကျခဲခဲ ရုနျးကနျ, အရငျးအနှီးတှေ အမြားကွီး ပေးဆပျရသလို ငွီးငှလှေ့နျးလို့ ပွနျရုနျးထှကျပွနျရငျလညျးမလှယျပွနျပါဘူး. မြားသောအားဖွငျ့ သင်ျဘောလိုကျကွတယျဆိုတာ ဝငျငှလေေးကောငျးတယျ ,ခပျသှကျသှကျလေး ငှရှော ရငျးနှီးလောကျစရာ ပမာဏလေးရရငျ သင်ျဘောသားဘဝကနား ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အလုပျလေးလုပျပွီး ဘဝကို အခွခြေ. ဒီလိုစိတျကူးတှနေဲ့ လုပျကွတာမြားပါတယျ.
( ဝါသနာပါလို့ ဒါမှမဟုတျ ရကွေောငျးဆိုငျရာ ဒီပလိုမာ, ဘှဲ့ ရထားလို့ လုပျကွတဲ့သူတှလေညျး တဈပုံတဈပငျပေါ့)
ဒါပမေဲ့ သင်ျဘောသားလောကထဲကို ဝငျရောကျတာ ကွာလာလလေေ ကုနျးပျေါကို ပွနျရောကျနိုငျဖို့ ခကျလလေပေါပဲ. ရထေဲမှာ တဈနှဈဆိုတဲ့ အခြိနျ ကုနျဆုံးသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့လကျထဲမှာ ငှကွေေးအခြို့ ရှိလာခဲ့ပမေဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အဆကျပွတျသှားတဲ့ ဦးနှောကျကတော့ ခတျေနောကျကနျြနခေဲ့ပါတယျ.
အပွောငျးအလဲမွနျတဲ့ခတျေဆိုတော့ ပိုဆိုးပါတယျ. အငျတာနကျလိုငျး သုံးစှဲရခြိနျမှာသာ သင်ျဘောသားဟာ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ ထိတှရေ့ပါတယျ. ဒါတောငျ ဟနျဆောငျမှုတှေ ပွညျ့နတေဲ့ ဖစျေ့ဘှတျဝနျးကငျြက သတငျးတှရေဲ့ ဖြားယောငျးမှုကိုလညျး ခံရပါသေးတယျ.
သင်ျဘောပျေါကို ငှရှောရုံသကျသကျနဲ့ တကျသှားလို့ကတော့ ငှကေလှဲပွီး ဘာမှကနျြမှာ မဟုတျပါဘူး. ဦးနှောကျထဲ ဘာမှမတိုးတကျလာတဲ့အခါ အိမျပွနျရောကျရငျလညျး ခဏနားပွီးသင်ျဘောပျေါကို ပွနျရောကျလာတာပါပဲ. လူလတျပိုငျး, လူကွီးပိုငျးတှအေတှကျ သိပျပွဿနာ မရှိလှပမေဲ့ လူငယျပိုငျးတှအေတှကျတော့ ဒါဟာ သတိထားစရာ အခကျြတဈခုပါပဲ.
ပညာသငျရဦးမယျ့ အရှယျမှာ သင်ျဘောပျေါမှာ အလုပျလုပျရငျး ငှခေညျြးသကျသကျကိုပဲ ရှာဖှနေကွေမယျဆိုရငျ သင်ျဘောသားဘဝထဲမှာ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ပိတျမိပွီး ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ တျောတေျာ့ကို ခကျခဲသှားပါလိမျ့မယျ.
( လူငယျတှအေပျေါ ကနြေျာ့အတှေးက မှနျခငျြမှလညျး မှနျနိုငျပါလိမျ့မယျ )
တဈခါတဈလေ နားခငျြစိတျနဲ့ ကုနျးပျေါမှာ အလုပျစမျးလုပျကွညျ့လို့ အရှုံးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါမှာ ပိုဆိုးသှားပါတယျ.
( အငျနာဗှနျစီ မသောကျမိလို့လညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ )
” ဟာ မဖွဈပါဘူးလေ ” ဆိုတဲ့ အတှေးဝငျသှားရငျတော့ နပေတေော့ သင်ျဘောသားဘဝနဲ့။ ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောသားဘဝကနေ ရုနျးထှကျဖို့ ကွိုးစားသူတိုငျး ပွတျသားတဲ့စိတျရှိဖို့ လိုပါတယျ. တဈနညျးအားဖွငျ့ သတ်တိရှိဖို့ လိုပါတယျ. ဝငျငှခေငျြး နှိုငျးယှဉျနသေရှကေ့တော့ ဒီတဈသကျ သင်ျဘောသားဘဝက ရုနျးထှကျဖို့ မလှယျပါဘူး. သင်ျဘောသား တျောတျောမြားမြားမှာ ခံစားရတတျတာကတော့ အကဉျြးကမြှုပါပဲ.
အလုပျမြားလှတဲ့ သင်ျဘောသားတှေ, ဖိအားမြားပွီး ခေါငျးခံရမှုမြားတဲ့ အရာရှိ ,အငျဂငျြနီယာတှအေတှကျ သိပျမသိသာလှပမေဲ့သင်ျဘောပျေါမှာ အသားကပြွီး ပုံမှနျလောကျသာ အလုပျလုပျရတဲ့ သင်ျဘောသားတှနေဲ့ ကြောကျခထြားတဲ့ သင်ျဘောတှပေျေါရောကျနတေဲ့ သင်ျဘောသားတှအေတှကျကတော့ အထီးကနျြမှုနဲ့ အကဉျြးကမြှုဒဏျကို ခံကွရတာမြားပါတယျ.
လုပျစရာရှိတာတှေ လုပျပွီးလို့ အခနျးကဉျြးလေးထဲ ပွနျရောကျလာတဲ့အခါ စိတျကတှယျရာမဲ့တတျပါတယျ. စိတျတှကေအပွငျကို ပြံထှကျသှားပမေဲ့ လူကတော့ ဘယျကိုမှ သှားလို့မရတဲ့ အခွအေနမှော စိနျချေါစရာ တဈခုခုကို လုပျဆောငျမနတေဲ့ သင်ျဘောသားဟာ’ ဂါ ‘ လာပါတယျ. ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောပျေါသှားပွီးငှရှောကွရတဲ့အပွငျ ကိုယျ့စိတျက ငွိတှယျနိုငျလောကျမယျ့ အရာတှကေိုလညျး ဖနျတီးနိုငျဖို့ ကွိုးစားကွရပါတယျ.
စာဖတျခွငျး, ကဗြာရေးခွငျး, ဂဈတာတီးခွငျး, သီခငျြးရေးခွငျး ဆိုခွငျး, ဂိမျးဆော့ခွငျး,ဖဲရိုကျခွငျးဗီဒီယိုကွညျ့ခွငျး စတဲ့ ကိုယျနဲ့အဆငျပွရောမှာ စိတျကိုနှဈပွီး နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားကွရပါတယျ. တခြို့ကလညျး သင်ျဘောနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ပညာရပျတှကေို ထပျဆငျ့လလေ့ာရငျး ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကို နောကျတဈဆငျ့မွှငျ့ဖို့ ကွိုးစားကွရပါတယျ.
ဘယျလိုပဲ ကွိုးစားနကွေပမေဲ့လညျး တဈခါတဈလေ ဝငျရောကျလာတတျတဲ့ ‘ အကဉျြးကမြှု ‘ ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကိုတော့ ဘယျလိုမှ လှတျမွောကျအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျကွပါဘူး. အဲဒီအခါမြိုးမှာ သင်ျဘောသားတှဟော ရှိသမြှအရာအားလုံးကို လှတျခထြားခဲ့ပွီး ကိုယျ့စိတျ ပြံသနျးရာဆီ အပွေးသှားလိုကျခငျြတော့တာပါပဲ.
သင်ျဘောသားတှရေဲ့ ခံစားခကျြတှကေတော့ ရေးမကုနျနိုငျအောငျပါပဲ. သင်ျဘောသားတှဟောလညျး ပုထုစဉျလူသားတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့လညျး ကာမဂုဏျအာရုံတှမှော ပြျောမှကွေ့တာပါပဲ. အမွဲတမျးလိုလို မဟုတျလှပမေဲ့ တဈခါတဈလတေော့လညျး ကိုယျစားခငျြတာလေးတှေ ကိုယျသှားခငျြတာလေးတှေ စသညျအားဖွငျ့ တောငျ့တမှုလေးတှေ ရှိတတျကွပါတယျ. ဒါပမေဲ့လညျး ဒါတှဟော စိတျကူးယဉျမှုသာဖွဈပွီး ပငျလယျထဲမှာ ဘယျလိုမှ ဖနျတီးယူလို့မရတဲ့ အရာတှပေဲဖွဈပါတယျ.
ဒါကွောငျ့လညျး ပငျလယျပြျောတှရေဲ့ ရငျဘတျဟာ အခွားသူတှနေဲ့ မတူညီဘဲ ကှဲပွားစှာ ခံစားတတျကွတာပါပဲ. ထပျပွီး ရေးနရေငျလညျးညညျးခငျြးတဈပုဒျသာ ဖွဈလာမှာမို့ ခံစားခကျြအကွောငျးကိုတော့ အနညျးငယျသာ တငျပွလိုကျရပါတယျ.
စီနီယာသင်ျဘောသားတှအေနနေဲ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နောကျလူငယျတှကေို သင်ျဘောသားမလုပျကွဖို့ ဘယျလိုပငျ တားနကွေပမေဲ့လညျး လူငယျတှကေတော့ လူငယျတို့ ထုံးစံအတိုငျး ရှတေို့းလာမှာပါပဲ.
ဒါဟာ လူကွီးနဲ့ လူငယျတို့ရဲ့ ဖွဈတတျတဲ့ သဘာဝပါပဲ. တားလို့လညျး ရမှာမဟုတျပါဘူး. လူငယျဆိုတာ စှနျ့စားလိုတယျ, စူးစမျးလိုတယျ ပွီးတော့ စိတျဓာတျတကျကွှကွတယျ. နောကျ….နဖူးတှေ့ ဒူးတှေ့ ကွုံတော့မှသာ ” အဘား အဘား ” နဲ့ အျောရငျအျောရပါစေ သူတို့ကတော့ တုံးတိုကျတိုကျ ကြားကိုကျကိုကျ လုပျကွမှာပါပဲ. သူတို့ရဲ့ ‘ အလုပျအပျေါ စိတျဝငျစားမှု ‘ ကို တားစရာလညျး မလိုဘူးလို့ ကနြျောထငျပါတယျ. ဒီတော့ ဘာလွုပျကသငျ့သလဲ ?
” မလာပါနဲ့ မလုပျပါနဲ့ ” လို့ တားနကွေမယျ့အစား ဘယျလမျးကိုလြှောကျရငျတော့ ဘယျခရီးကိုပေါကျတယျ , ဘယျလိုအန်တရာယျတှကေို ဘယျလိုဖွတျကြျောရမယျ , ဘာတှကေိုရှောငျပွီး ဘာတှကေို ဆောငျသငျ့တယျဆိုတာတှကေိုသာ လမျးညှနျအကွံပေးကွတာက အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ လို့ ယူဆမိပါတယျ.
သူတို့ လြှောကျမယျ့လမျး သူတို့ရှေးပါစေ… သူတို့ဘဝအတှကျ သူတို့ဆုံးဖွတျပါစလေေ…. တတျနိုငျသရှတေ့ော့ လမျးညှနျနဆေဲ နိုငျလငျး ( ပငျလယျပြျော )
ဒီဆောငျးပါးထဲမှာ ရေးခဲ့တဲ့အခကျြအလကျတှဟော မပွညျ့စုံသေးပါဘူး. စာသိပျရှညျနလေို့ ပွီးတော့ ဖနျတဈရာတေ ဝဖေနျခကျြတှကေို ထပျမထညျ့ခငျြတော့လို့ ခနျြလှပျထားခဲ့ပါတယျ.
မှတျခကျြမှာ လိုတာတှေ ဖွညျ့ပေးကွပါတော့…..